Rangoon Tea House | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Food : 4.75 Decoration : 4.75 Service : 4
Phone - 09 517 8329
- Steamed Pork-belly Bun (Pauk Si)
- Pyay Paratha
- Nan Gyi Thoke
77 Pansodan Rd, (Lower Block), First Floor, Kyauktada
အမှတ် (၇၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း (အောက်ဘလောက်)၊ ပထမထပ်
Activities on Rangoon Tea House
Htoo Htoo Aung uploadedaphoto at Rangoon Tea House5years ago
Phi O Nar like Rangoon Tea House6years ago
Cherry Berry like Rangoon Tea House6years ago
gineal uploadedaphoto at Rangoon Tea House6years ago
Pop Corn reviewed Rangoon Tea House6years ago
Rangoon Tea House က ပေါက်ဆီ နဲ့ ကျောက်ကျောလက်ဖက်ရည် သောက်ပြီးကြပြီလား.. ?? ပေါက်ဆီရဲ့ အပြင်ဂျုံသားက အရမ်းနူးညံ့တော့ သွားမှာကပ်နေတာကလွဲရင် အရမ်းအရမ်း အရသာရှိပါတယ်.. အတွင်းထဲက ဝက်သားကင်ကလည်း တော်တော်လေး ကောင်းတယ်.. အရမ်းလည်း လတ်ဆတ်တော့ အရသာက ပိုလို့ကောင်းနေတာပေါ့.. RTH ရဲ့ လက်ဖက်ရည်ကိုတော့ စွဲလန်းပြီးသားမို့လို့ ဘယ်လိုပဲ ဆန်းသစ်မှုတွေလုပ်လုပ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ အမြဲအားပေးပါတယ်.. အခုထိတော့ အမယ်စုံအောင် မမြည်းစမ်းရသေးပါဘူး.. အခွင့်အရေးရတိုင်း သွားစားဖို့ကိုလည်း စိတ်ကူးထားပါတယ်.. :)
Pop Corn uploadedaphoto at Rangoon Tea House6years ago
Writeareview for Rangoon Tea House
Report for Rangoon Tea House
Reserve table at Rangoon Tea House